musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Kufamba neKushanya vanobata zviitiko kumusoro 39.6% muna Chikumi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kubata zviitiko munharaunda yekufambisa neyekushanya kwakaratidza zviratidzo zvekudzoka muna Chikumi, zvichitevera kudzikira mumwedzi mishoma yapfuura.
74 zvibvumirano zvakaziviswa munharaunda yepasirese yekufambisa uye yekushanya munaJune.
Basa rekuita rakaratidza kuvandudzwa mumisika inokosha kusanganisira US, UK, China neGermany.
India yakaona kuderera kwechiitiko chekuita.
Zvibvumirano makumi manomwe nezvitanhatu (zvinosanganisira kubatanidzwa nekutengwa, zvakavanzika, uye mari yemubhadharo) zvakaziviswa munzvimbo yepasirese yekushanya uye yekushanya munaJune, kunova kuwedzera kwe74% kupfuura makumi mashanu nematanhatu zvakaziviswa muna Chivabvu.
Kubata zviitiko munharaunda yekufambisa neyekushanya kwakaratidza zviratidzo zvekudzoka muna Chikumi, zvichitevera kudzikira mukati memwedzi mishoma yapfuura. Kukura kwechiitiko chekuita kwechikamu chakarohwa zvakaipisisa nekuda kwekukiya uye kurambidzwa kwekufamba pakati penjodzi yeCOVID-19, chingave chiratidzo chakanaka chemwedzi iri kuuya.
Ese madhiri emhando (pasi pekufukidzwa) akapupurirawo kukura muhuwandu hwezvibvumirano munaJune uchienzaniswa nemwedzi wapfuura. Nepo kubatanidzwa & kwekutenga zvibvumirano zvakawedzera ne26.5%, huwandu hweyakazvimiririra equity uye mari yekudyidzana madhiri yakawedzerawo ne9.1% uye 137.5%, zvichiteerana.
Kubata zviitiko kwakaratidzawo kuvandudzika mumisika inokosha kusanganisira iyo US, ivo UK, China, Germany neSpain, nepo India yakaona kuderera kwechibvumirano.